Analakely : Nanjavona ny fiara Audi Q5 -
AccueilSongandinaAnalakely : Nanjavona ny fiara Audi Q5
Fiara mitondra ny marika Audi Q5 iray no nanjavona teny Analakely ny zoma lasa teo, rehefa nentina vehivavy mpisoloky nitsoaka. Araka ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny polisim-pirenena, dia fantatra fa fiara namidy tany anaty tambazotran-tserasera “facebook” io fiara nalaina am-pitaka io. Vehivavy iray 24 taona no niantso sy nifampiresaka tamin’ilay lehilahy tompon’izany, izay nilaza fa ho alainy ny entam-barotra. Raikitra ny ady varotra ka rehefa nifanaraka tsara ny roa tonta dia tapaka fa alefa amin’ny sarany 95 tapitrisa ariary io Audi Q5 io. Teny Analakely no toerana nifanomezana hanaovana ny ity sy nday ka samy tonga teny ara-potoana na ny tompon’ny fiara na ny olona nilaza ny hividy izany. Araka ny loharanom-baovao hatrany, dia roa vavy izy ireo no niaraka sy nihaona tamin’ny tompon’entana. Teo no nilazan’ireto farany fa amin’ny alalan’ny taratasim-bola no andoavan’izy ireo ny vidin’io fiara io. Nandà izany ny tompon’entana tany am-boalohany noho ny fiahiahiana maro samihafa tao aminy saingy rehefa nandeha indray ny fahaiza-miresaka sy ny fandresen-dahatra nataon’ireto mpisoloky efa avo lenta ireto, dia nanaiky ihany ilay mpivarotra. Noho ny fangatahan’ny tompon’ny fiara ihany koa, dia nanaiky ny iaraka taminy haka ireo vola tany amin’ny banky ny iray tamin’ireo mpisandoka , raha toa ka nomena fanalahidy ary niandry tao anaty fiara ilay namany.
Raha iny an-dalana ho any amin’ny banky iny anefa izy ireo, dia tsy hita tampoka io vehivavy mpisoloky io saingy nanohy ny diany hatrany ilay niharan’ny asa ratsy. Rehefa nohamarinin’ny tomponandraikitra teo anivon’ny toerana fangalàna vola io tarasim-bola io, dia fantatra fa hosoka ary teo vao nikoropaka ny tompon’ny fiara. Efa tsy hita popoka intsony anefa ireo olon-dratsy. Tsy niandry ela ilay lehilahy , fa nanatona ny polisin’ny BC avy hatrany nametraka fitoriana. Rehefa nandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana azy roa vavy efa tena za-draharaha ireto, dia tra-tehaka teny amin’ny trano fonenany teny Iavoloha ny ampitson’iny ihany. Raha resaka varotra vato sarobidy sy “mercure” amin’ny alalan’ny antso an-telefaonina no tena famelezan’ireo mpisoloky sy mpisandoka tamin’ny taon-dasa, dia isan’ny fitaovana hampiasain’izy ireo hanatanterahana ny fikasan-dratsiny indray ankehitriny ny tambazotram-pifandraisana, izay efa tena feno azy ireo. Mila mailo sy mandinika tsara noho izany ny rehetra alohan’ny hividianana na hamarotana zavatra any anatin’izy ireny, satria dia tsy kely lalana ny ratsy ary efa miandahy miambavy ny fanaovana izany. Efa natolotra ny fampanoavana moa ny raharaha, ary nadoboka avy hatrany eny amin’ny fonjan’Antanimora izy roa vavy ireo miandry ny fotoam-pitsaràna azy.